Okpomoku di n’uwa dum nwere ike iwepu ubochi izu oke zuru oke | Netwọk Mgbasa Ozi
Nke a bụ ihe ọmụmụ izizi banyere ihu igwe dị mma nke akwụkwọ sayensị gbara banyere mgbanwe ihu igwe na-ekpughe. Enwere ike iwepu ụbọchị ndị ahụ zuru oke nke na ọ naghị ekpo oke ọkụ, ọ naghị ajụ oyi na nke oke oke iru mmiri na-eme n'ọdịnihu. n'ihi na okpomoku zuru ụwa ọnụ n'ọtụtụ akụkụ ụwa.
Ebe kachasị emetụta ga-abụ ebe okpomọkụ, ọ bụ ezie na a ga-enwekwa ebe anyị ga-enwe ọ enjoyụ ụbọchị ndị a karị, dịka Europe ma ọ bụ Seattle.
Thosebọchị ndị ahụ mgbe ihu igwe na-akpọ gị ka ị pụọ n'èzí, ma ị ga-emega ahụ, soro ndị ezinụlọ nwee ntụrụndụ ma ọ bụ naanị ịnụ ụtọ n'èzí, bụ ndị a na-ahụ site na ịnwe ọnọdụ okpomọkụ n'etiti 18 na 30ºC, oke iru mmiri na naanị ụfọdụ igwe ojii dị elu .
Dabere na ọmụmụ ihe ahụ, n'ime afọ 30 gara aga enwere ụbọchị 74 na ọnọdụ ndị a, mana site na 2035 a ga-ewedata ha, nke mbụ ruo 70 ma mesịa ruo 64 n’ime afọ iri abụọ gara aga nke narị afọ. Ọ bụ ezie na, n'ezie, ọ gaghị emerụ mpaghara niile nha anya.
Ndị ọ kachasị emetụta bụ Rio de Janeiro, na nkezi nke ụbọchị 40 nke ihu igwe zuru oke pere mpe; Miami, nke nwere ụbọchị 32 dị ala; Washington, dị afọ 13; Atlanta 12, Chicago, 9, New York, 6; Dallas, 1. Ọtụtụ Africa, ndịda Eshia, ugwu Australia, na ọwụwa anyanwụ South America ga-emetụtakwa. N'aka nke ọzọ, ebe kachasị baa uru, ebe ọnụọgụ ụbọchị zuru oke ga-eto bụ Seattle, Los Angeles, England na ugwu Europe.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-elekwasị anya na ihu igwe dị oke njọ na otu ọ ga-esi njọ ka ụwa dị ala na-ebili maka nyocha ha, nke kwesịrị ịkwalite ịmara ihe na-eme n'ụwa ma were usoro iji gbochie ọnọdụ ahụ ka njọ.
I nwere ike ịgụ akwụkwọ zuru ezu ebe a (Ọ bụ Bekee).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Amụma » Okpomoku di n’uwa n’ile nwere ike iwepu ubochi zuru oke